» हेटौंडाका युवा व्यवसायी पुडासैनी भन्छन् : “समाज शाकाहारी भोजनतर्फ आकर्षित हुँदैछ”
हेटौंडाका युवा व्यवसायी पुडासैनी भन्छन् : “समाज शाकाहारी भोजनतर्फ आकर्षित हुँदैछ”
२०७५ श्रावण ६,आईतवार १२:४२
मकवानपुर ६ साउन । मकवानपुरको हेटौंडामा विभिन्न व्यवसायीक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु धेरै छन् । यी दिनहरुमा होटल व्यवसायमा लगानी गर्नेहरुको संङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको छ । सामान्य चिया पसलदेखि तीन तारे होटलसम्म संचालन गरेका व्यवसायीहरु पनि हेटौंडामा छन् । माछा मासु र विभिन्न परिकार सहितका भोजन पस्कने होटलहरुको संङ्ख्याको तुलनामा शाकाहारी भोजनालय कमैमात्रामा देखिन्छन् । त्यसकारण पनि हेटौंडामा शाकाहारी भोजनालय को आवश्यकता ग्राहकहरुले महशुस गर्न थालेका छन् ।
त्यसोत शाकाहारी भोजनालयमा लगानी गर्नेहरु कम छन् तर जतिले लगानी गरे उनीहरुको अवस्था भने त्यत्ती खस्केको सुनिदैन । यसैबीचमा १७ बर्षदेखि विभिन्न व्यवसाय सहित समाजिक काममा लागेका युवा व्यवसायी विनोद पुडासैनीले हेटौंडा २ पुरानो देवीहलरोडमा शाकाहारी परिकार पस्कने उदेश्य सहित “श्री कृष्ण भोजनालय शुद्ध शाकाहारी होटल ” सुरु गरेका छन् । तु खबरले युवा व्यवसायी पुडासैनीसंग गरेको कुराकानी यसप्रकार छन् ।
प्रश्न : हेटौंडामा शाकाहारी भोजनालय कहिलेबाट शुरु गर्नुभयो ?
उत्तर : भर्खरै संचालनमा ल्याइएको हो । यसअधि पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको थिएँ, तर होटल व्यवसायमा भने भर्खरै हात हालेको हुँ ।
प्रश्न : शाकाहारी भोजनालयनै भनेर शुरु गर्नुको कारण के हो ?
उत्तर : हेटौंडामा माँसाहारीको संङ्ख्या घट्दो छ र शाकाहारीको संङ्ख्या बढ्दो छ । साथै माँसाहारी भोजनालय धेरै खुलेका छन् ,तर शुद्ध शाकाहारी खाना खानको लागि चित्त बुझ्दो होटल हेटौंडामा कमै छन् । त्यसकारण मैले शाकाहारी होटल संचालनमा जोड दिएको हुँ ।
प्रश्न : युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, तपाईका अरु व्यवसाय पनि छन्, व्यवसायमा लाग्नुभएको चै कति भयो ?
उत्तर : १५ बर्षदेखि व्यवसायीक जगतमा लागेर अनुभव बटुल्दै आएको छु । र सामाजिक काममा पनि म त्यत्तिकै सक्रिय छु । विभिन्न व्यवसायमा अनुभव बटुल्दा, बटुल्दै अब होटल व्यवसायमा पनि संभावना खोज्ने क्रममा छु । आसा छ मेरो सेवा र सुविधाप्रति ग्राहकहरुले राम्रै प्रत्रिक्रिया जनाउँनु हुनेछ ।
प्रश्न : तपाईले यस व्यवसायमा लगानी एक्लै गर्नुभएको हो की अरु पनि छन् लगानीकर्ता ?
उत्तर : अरु छैनन् म एक्लै हुँ, एक्लैले लगानी गरेको छु । हाम्रो उमेरका युवाहरु विदेशमा गएर निकै गर्मीमा काम गर्छन्, तर मैले त्यहि पैसा नेपालमै केहि गरौं भनेर लगानी गरेको हुँ ।
प्रश्न : व्यवसाय र सामाजिक काम दुवै गर्नुको उदेश्य चै के हो ?
उत्तर, सामाजिक काम गर्नु मेरो सानैदेखिको रुचिको विषय हो र यो सन्तुष्टीको विषय पनि हो, र अर्को कुरा व्यवसाय भनेको आर्थिक पक्षसंग संम्बन्धित कुरा हो । यसबाट मेरो आर्थिक पक्ष सवल बन्नुको साथै दैनिक गुजारा समेत चल्छ । त्यसैले दुवैलाई समेटेर लगेको हुँु ।
प्रश्न : शाकाहारी भोजनालयबाट पर्याप्त आम्दानी लिन सकिन्छ त ?
उत्तर : सकिन्छ मलाई विस्वास छ । राम्रो गर्दै पनि जानेछु । पारिवारीक वातावरणमा सुविधा दिने प्रयास गरेको छु । होटल खोलेको धेरै दिन भएको छैन तै पनि एक पटक खाएर जानेहरु फर्किएर फेरीपनि खाना खानको लागि आएका छन् । यसबाट मलाई अझै होसला मिलेको छ । सायद धेरै मुनाफा दिन नसकेपनि ग्राहकको सन्तुष्टीसंगै मेरो गुजारा चल्ने निश्चित छ ।
प्रश्न : के के पाईन्छन् त तपाईको होटलमा ?
उत्तर , शुद्ध साकाहारी भोजन पाईन्छन् । जसमा, स्पेशल खाना सेट, तन्दुरी, नान रोटी, खाजाको विभिन्न परिकारहरुमा मःम, चाउमिन, पास्ता, चिया, स्पेशल कफि ,आईसक्रिम ,दुध, दहि, घिउ, पनिर, तथा अर्डर अनुसारको बर्थडे केक र बेकरीका परिकारहरु पनि पाईन्छन् । म आफु पनि शाकाहारी भएको हुनाले शाकाहारी भोजन बेच्ने उदेश्य लिएको हुँ । फेरी अन्य होटलहरुमा शाकाहारी खाना खाँदा मासुको लसपस होला भन्ने डर भएका ग्राहाकहरुले यँहा आएर ढुक्क संग खानाका परिकारहरु खान सक्छन्
प्रश्न : समयका लागि धन्यवाद ।
उत्तर , तपाइहरुलाई पनि धन्यवाद मेरो कुरा तु खबरमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा ।